Wararka - Falanqaynta xaaladda qiimaha birta
Saameynta sababaha sida hagaajinta dhaqaalaha gudaha iyo rajada rajada laga qabo koritaanka dalabka, sicirka biraha gudaha ayaa keenay koror guud guud ahaan dhowaan. Iyadoo aan loo eegin haddii ay tahay dib-u-adeegsiga dhismaha, ama birta loo isticmaalo gawaarida iyo qalabka guryaha, qiimuhu waxay muujinayaan isbeddel kor u kaca ah.
Baahida ayaa kor u qaadeysa qiimaha biraha
Gelitaanka 2021, dhowr mashruuc oo waaweyn oo injineernimada dalka oo dhan ah ayaa bilaabay midba midka kale dhismehiisa, iyaga oo dardar gelinaya "baahida biraha". Baahida loo qabo birta ayaa wali xoogan sanadkan. Mowjadahaan kor u kacaya ee suuqa birta dabaaldegga guga kadib waxay sidoo kale xaqiijineysaa isbeddelkan. ”Intaa waxaa dheer, dhinaca qiimaha, kororka qiimaha koke, birta iyo alaabada kale ee ceyriinka ah ayaa sidoo kale door kaalin ka qaatay qiimaha birta ; marka la fiiriyo jawiga caalamiga, cadaadiska sicir bararka adduunka ayaa ka sii weynaan doona sanadka 2021, iyo qiimaha badeecadaha waaweyn ee suuqyada caalamiga ah guud ahaan way sii socon doonaan inay sare u kacaan inta lagu gudajiro Damaashaadka Guga. Fasaxa ka dib, suuqa gudaha wuxuu ku xirmi doonaa dalal shisheeye, saameynta isku xirnaantuna waa iska cadahay.
Shirkadaha birta ahi waxay ku socdaan awood buuxda
Wariyaha Shanghai Securities News wuxuu ogaaday in shirkadaha biraha gudaha ay sidoo kale ku shaqeynayaan awood buuxda baahida awgeed. Sida laga soo xigtay tirakoobyada Ururka Birta iyo Birta ee Shiinaha, bartamihii Febraayo 2021, celceliska soosaarida birta ceyriinka ah ee maalinlaha ah ee shirkadaha muhiimka ah ee birta waxay ahayd 2,282,400 tan, oo ah rikoor sare; koror bil-bil ah oo ah 128,000 tan, koror dhan 3.49%, iyo koror sanadle ah oo gaaraya 24.38%.
Kadib "bilow wanaagsan" Sannadka Dibiga, ma jirtaa meel ay qiimayaasha birtu sare ugu sii kici karaan?
Maaddaama rajada laga qabo soo kabashada dhaqaale ee gudaha iyo dibaddaba ay sii xoogeysaneyso, dalabka dibedda ee dulsaaran ayaa si tartiib tartiib ah u soo kabanaysa, iyo faa'iidooyinka shirkadaha warshadaha gudaha ayaa hoos u dhacay, iyagoo taageero siinaya baahida hoose ee warshadaha birta. Shirkaddu guud ahaan waxay wali si taxaddar leh rajo ugu qabtaa baahida hoose ee birta ee 2021.
Marka la eego wadiiqooyinka hoose, waaxda warshadaha, waxsoosaarka, mashiinada dhismaha, qalabka guryaha, iyo baahida qaab dhismeedka birta ayaa sii wadi doonta inay sii socdaan kororka rubuca afaraad ee 2020. Waxaa la filayaa inay ilaalin doonto xawaare wanaagsan muddo waqti mustaqbalka si loo bixiyo taageerada taarikada; Badeecadaha dhaadheer ee hooseeya Baahiyaha guryaha waxaa la filayaa inay ilaaliso xoogaa adkeysi ah.